Ukuphuca ibhodi - lena ngendwangu. Kuphela canvas akuyona abathungela ikhono ukupheka. Kunzima ukucabanga ukupheka into edliwayo ngaphandle "ngendwangu" enjalo.
Amabhodi konke - futhi professional labapheki, labapheki futhi self-wafundisa. Kuyinto asihambisani ukusika ukudla etafuleni.
Izimfuneko osezingeni ibhodi kancane. Kunezinhlobo ezine kuphela. Ukuphuca ibhodi kumele abe makhulu, Kumelwe babe namandla, ngesimo ukhululekile futhi nakanjani ahlanzekile. Ngenxa yalesi sizathu, ochwepheshe batusa ukusetshenziswa amalungiselelo uhlobo ibhodi yakho ngayinye.
Khona-ke kukhona umbuzo esizwakalako. kufanele kube Bangaki ekhishini amabhodi? Kungakuhle - nambili. Ngayinye umkhiqizo ebhodini. Kodwa sibhekwa njengokudla okuphambili, ngakho-ke kuyadingeka ukuba ekhishini okungenani 4 ebhodini:
Ukuze izinhlanzi, njengoba kugcina nephunga edabukisayo.
Ukuze inyama. Kufanele kube eqinile ngempela, njengoba kuyoba amathambo oqoshiwe nokulungisa chops.
Ukuze imifino, ayi kanye neminye imikhiqizo.
Eyesine ukuzisika ibhodi kubalulekile isinkwa.
Manje, njengoba usayizi amabhodi. isinqumo sabo ngoba inyama kanye nenhlanzi 30x50 cm nge ukushuba 3 cm. Amabhodi esinkwa imifino zingenziwa ezincane futhi izacile.
Ngokwesiko, ikhishi amabhodi zenziwa ngokhuni. Lokhu kungenxa kakhulu oki, beech, somunga. Amabhodi zingenziwa ngokhuni okuqinile noma kuhlanganiswe (okokugcina ethathelwe izingcezu ehlukene).
Ngemva ukusetshenziswa ebhodini ngalinye kudingeka begeza ngamanzi ashisayo futhi njalo ezomile. Amanzi kufanele sokukhipha ngokuphelele, ngakho-ke kufanele hang. Akunjalo kudala kwakukhona ibhodi plastic. Inamandla kakhulu, isikhathi eside futhi wageza kahle. Kubhekwe enokwethenjelwa kakhulu itshe ebhodini, kodwa ezibizayo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuze uhlanze izinhlanzi badinga ibhodi ahlabayo ngogodo ngocingo. Kufanele kube izinkuni, futhi gib - kusukela plastic okuhlala. Ngakolunye uhlangothi we ipuleti clamping ahlelwe spikes.
Le nhlanzi ubekwe ameva umsila bese wehlise ibha, ulungise isiqhebezo yayo. Khona ungaqala yokuhlanza. Leli bhodi ukuzisika akuwona ukhululekile kakhulu izinhlanzi.
Uma ekhishini ibhodi ubudala wangena labhidlika, musa ugijimele ukugijimela esitolo. Ungazama ukwenza le mfanelo ngezandla zabo. Ukuze lokhu kuyadingeka ukuze uthole impahla (ukuze uthole okhunini 20-40 mm awugqinsi, 300 mm ububanzi kanye 400-600 mm eside emkhayeni - akuyona inkinga). Ngemva kokubonisana nonkosikazi wakhe, ukudweba ukuma ikusasa ebhodini. Lapho umdwebo usulungile, ukusika ngokucophelela off bonke ezingadingekile.
ikhishi lakho ebhodini isibe ezifanayo nomkhiqizo ezikhangayo. Manje kubalulekile ukwenza bushelelezi. Ukuze asuse iqhubu, sithatha a lokukhuhla indawo, bese ikhasi okusanhlamvu ezincane. Ekugcineni, sicela esihle kakhulu lokukhuhla maholoholo esiphansi. Wahlanza umkhiqizo ukhuni uthuli ijazi obuhle sunflower oil. Ngemuva omiswe, amafutha okupheka ivikela ibhodi ngokumelene Ukungena emanzini futhi ukusonteka olwengeziwe.
Lapha ilungele ukusika ebhodini. Izandla zakhe ngezinye izikhathi wenze encane, kodwa ngebuciko, okuyinto akanamahloni ukukhombisa umkakhe.
Romance futhi umhlobiso ngezandla zakhe. Ikhaya Decor
Senza yezandla aphume amapuleti alahlwayo
Uwoyela rapeseed: inzuzo kanye nokulimala, kwenkululeko
Kungenzeka yini ukunikeza onogwaja ukhukhamba futhi zucchini?